सेरोफेरो : यहाँ मुत्ने कुकुर हो...
चाहिएभन्दा बढी कर्मचारी भर्ति गरेको न–गरपालिकामा फोहोर उठाउने कर्मचारी आन्दोलनमा थिए, ‘स्थाइको मागसहित ।’ सरकारले बजारबाट फोहोर नउठ्याएको आज १९ औं दिन भएको छ । फोहोर गन्हाएर घरमा बसिखानु थिएन । शनिबारको दिन । उसले पनि घरको दबाब खेप्न सकेन । फोहोरको पोको बोकेर एकाविहानै हिड्यो । हरेक ठाउँमा कि त मान्छे पहरेदार बसेका थिए कि त बोर्ड झुण्डाइएको थियो, ‘यहाँ फोहोर फाल्न मनाही छ ।’ हिड्दा हिड्दै उ न–गरपालिका अघि नै पुग्यो । त्यहाँ पनि उहि बोर्ड थियो, ‘यहाँ फोहोर फाल्न मनाही छ ।’ उसले त्यहीँ गएर फोहोर फाल्यो र बोर्ड फर्काएर लेख्यो, ‘मैले फालेको हैन ।’
पान खाएर हिड्दै गरेको एउटो मान्छे एउटा सूचनाको अघि ठिंङ्ग उभिएको थियो । लेखिएको थियो, ‘ यहाँ पान गुड्खा, सुर्ति खैनी खाएर नथुकि सभ्य नागरिकको परिचय दिनुहोला ।’ पान खाएपछि नथुकिकन परिचय गर्नु पर्ने भएकाले उसलाई बडो फसाद प¥यो । अफ्ठ्यारो मान्दै, पान चपाउँदै आफ्नो परिचय खुलायो ।
मेरो नाम बिरेन्द्र सुवेदी हो । घर कास्की । बिराटनगरमा काम गर्छु । परिवारमा दुई आमा, एक बा छन् । श्रीमती छोराछोरी पोखरामा बस्छन् । म गलफ्रेन्डसँगै बिराटनगरमा बस्छु । यो केटी मेरो तेस्रो श्रीमती हुने छाँट छ । पहिलोले छाडेपछि फ्रष्टु भएर दोस्रो विहे गरेँ । त्यो पनि पहिलो श्रीमती जस्तै बाउआमाको रोजाइमा नै । कुरो फिटिक्कै मिल्दैन । उसलाई घरै राखेर ढाटा बस्न प¥यो । ऐले तेस्रो चल्दैछ, आफ्नै रोजाईमा । म निक्कै सभ्य मान्छे हुँ । दुःख गरेर पढेँ...
यति भन्दा नभन्दै उ सिगान निकाल्दै घुक्क घुक्क रुन थाल्यो । रुँदा रुँदै खोकि आयो । उसले घ्वाक्क खोक्ने बित्तिकै बोर्ड राखेको भित्तै भरि प्याच्यात्तै मुखको पान छिरल्लियो । ‘सरी’ जाँदाजाँदै उसले भन्यो, ‘मेरो परिचय आजलाई यत्तिनै ।’
Sanjib Chaudhary January 9, 2016 at 2:02 AM
Nice one! Enjoyed Bhabaji!!
Bhabasagar Ghimire March 7, 2016 at 9:37 PM
Thank you so much Sanjib ji !